Rita, Writing for My Sake!: 'အ' သုံးလုံး (သို့မဟုတ်) ထမီ
Posted by Rita at 5/22/2010 02:35:00 PM
ခင်ဗျား ကလည်း ခင်ဗျားပါဘဲ ဗျာ
အ၇မ်း ကျယ်တာ ဘဲ
ဆင် မ ကြီး ၇ဲ့ဟို ဟာ ကို အနာ ပါဆို ပြီး
အော်နေတဲ့သူ နဲ့ တူ နေပြီနော်
သတိလည်း ထား ဦး
ထက်၂ တို့ လို နာမည်ကြီး ချင်တာ သက်သက်
ဆို၇င်တော့ မပြော တော့ပါဘူး (ဘာမှကို)
နှစ်ပုဒ်လုံးကို ..။ ဘာလိုလိုမှတော့မဖြစ်ပါဘူး
post က တခုတည်းရယ်နော်။
ဟမ် အီးမေးလ်က ဘယ်မှာလဲ???
အဲဒါဆို အဲဒီလို ဘလော့ကို လာဖတ်တဲ့ wint က ဆင်မကြီးရဲ့ အနာကို သွားရည်လာကျတာလား။
စာလာဖတ်သွားပါတယ်.. အရေးမကြီးတာတွေ လွှင်ပစ်လိုက်
တစ်ချို့ကိစ္စတွေကို သိပ် အများကြီး မခံစားစေချင်ဘူး -
တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုပဲ နားလည်မှု လွဲတာမျိုး - ( သို့တည်းမဟုတ် ) စာဖတ်သူ ဖော်ပြထားတာကို စာလုံးတိုင်း တစ်လုံးချင်း တိတိကျကျ မဖတ်မိပဲ ကျော်ဖတ်သွားမိရာကနေ တစ်ဖက်လူက စိတ်အချဉ်ပေါက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ( စာဖတ်သူတယ်ဆိုတဲ့ သူ တော်တော်များများက ကိုယ် အရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာလောက်ကိုသာ စာလုံးစေ့ဖတ်ကြတာမျိုးမလား - တော်ယုံဆို မြန်မာလူမျိုး မြန်မာစာ ဖတ်တာဆိုတော့ ရှပ်ဖတ်သွားကြတာ များတယ်။ )
အဓိကက Blogger ဆိုတာ အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုပဲ - တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တိုက်ခိုက်တာတွေ ထိခိုက်တာမျိုးတွေ မြင်ရတာထက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖေးမတာ ကူညီတာ - မောင်နှမလို မိသားစုလို စောင့်ရှောက်တာ ဒါမျိုးပဲ မြင်ချင်မိတယ်။
ကိုZT ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။
သို့သော်လည်း ကိုယ့်အနေနဲ့တော့ မောင်နှမလို ကူညီစောင့်ရှောက် ဖေးမတာတွေထိ မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူက ညလဆ သိပ်ကြိုက်တော့ ညလဆပြောဖူးတဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ ပြောရဦးမယ်။ တခါက ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့ တယောက်က ညလဆကို အတင်းပြောတယ်။ serious မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တာပါ။ ကိုယ်ကလဲ နောက်ချင်တာနဲ့ ညလဆကို ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒီမှာ ညလဆက ဘာပြန်ပြောလဲ ဆိုတော့... သူတို့ ချီးကျူးမှာထက်စာရင် အတင်းပြောတာမှ ခံလိုက်ချင်သေးတယ် တဲ့။
ကိုယ်လဲပဲ... ယောက်ပြားလိုဟာတွေက ကူညီဖေးမစောင့်ရှောက်မှာထက်စာရင်တော့ သူတို့က အတင်းပြောခံရတာမှ တော်သေးတယ် လို့ ထင်မိတယ်။
အဲဒီ ယောက်ပြားကောင်နဲ့ ကိုZT သိရင်တော့ ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ကိုယ်တလွဲရေးသလား သူတလွဲပြောသလား ကိုယ့် mail ထဲက post အဟောင်းနဲ့ တိုက်ကြည့်ပြီး၊ တလွဲပြောတဲ့လူက တသက်လုံး ကျွန်ခံကြေး၊ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်သေကြေး၊ ဒါမှမဟုတ် လူလယ်ကောင်မှာ နားရင်းအုပ်တာ ခံကြေး လောင်းရဲသလားလို့။
ဖတ်ပြီးနားလည်မှုလွဲရင်လည်း တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရတယ်။ ယောက်ပြားကျင့် ယောက်ပြားကြံ ကြံစရာ မလိုဘူး။ ညလဆကိုတောင် သတိပေးထားရသေးတယ်။ ယောက်ပြားတစ်ယောက်က လာကြောင်ချင်ကြောင်လိမ့်မယ် ကိုယ့်အန္တရာယ် ကိုယ်ကြည့်ရှောင်လို့။
ကိုယ်ကတော့ အဲ့နေ့က ကျောင်းမတက်ဘူးနော်
GAY ဘာညာ အဲ့လို စောက်ဖြစ် မရှိတဲ့အကောင်တွေနဲ့ ယှဉ်ယှဉ် မပြောပါနဲ့
အခြောက်တွေကမှ ကိုယ်ပြောတဲ့စကား ကိုယ်တာဝန် ယူနိုင်တာ
အဲ့ကောင်တွေက အခြောက်လောက်တောင် သတ္တိရှိတာ မဟုတ်
I have an impression that you are taking quite seriously against self-proclaimed, Burmese politicians abroad. Is it just those politicians that you disapprove of or you are anti-politcal in general? If the anser is yes, what is it that you don't like them or you are against politics, if I may ask?
Of course you don't have to answer it if you think it's not worth answering. Just say eff off..
I used to reply that to the questions that unnecessarily irk me.
@ Bro Watoto
နိုင်ငံရေးသမားလို့ ခေါ်တဲ့သူ အားလုံးအပေါ်မှာ against လုပ်ချင်တဲ့စိတ် မရှိပါဘူး။
အပြောနဲ့ အလုပ် တခြားစီဖြစ်နေတတ်တဲ့၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနိမ့်တယ်လို့ ယူဆမိတဲ့ဟာတွေ အပေါ်မှာတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကလည်း နိုင်ငံရေးသမားလို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ်တင် မကဘဲ ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမဆို ဖြစ်တဲ့စိတ်ပါ။ (ဥပမာ ခုလောလောဆယ် ရေးတဲ့ post ၂ ခုမှာပါတဲ့ ယောက်ပြားကောင်လိုဟာမျိုး။ တသက်လုံး ကျွန်ခံကြေး၊ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်သေကြေး၊ လူလည်ကောင်မှာ နားရင်းအုပ်ခံကြေးလို့ ပြောတော့ ဘာသံမှကို မကြားတော့ဘူး။)
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးသမားလို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေ ပေါ်မှာတော့ ပိုဖြစ်မိသလိုလို ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း ဆိုခဲ့တဲ့ အရည်အသွေးတွေက အဲဒီဟာတွေမှာ ရှိတာ ပိုသိသာနေတာကြောင့်ပဲ။ တခြားလူတွေမှာက သူတို့လောက် မသိသာဘူး။ ဘာလို့ဆို သူတို့လိုဟာတွေက အွန်လိုင်းမှာ ပို ထောင်ထောင် ထောင်ထောင် လုပ်ကြတာကိုး။
သင်္ကြန်တုန်းက လျှောက်လည်နေတဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ဘယ်ကဆိုဒ်က ယူသလဲတော့ မသိဘူး။ ယူပြီး အောက်က "... ကိုတော့ မကြောက်ဘူး" ဆိုတဲ့ caption နဲ့ တွဲတင်လိုက်လို့ ဗမာပြည်မှာ နေတဲ့ ကောင်လေးတွေက တခြားဆိုဒ်ကနေ ပြန်ရှင်း ပြန်ဖြုတ်ခိုင်းလုပ်ရတယ်ဆိုတာ အစ်ကိုလဲ ကြားမယ်ထင်တယ်။ post မှာလည်း ထည့်ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီလို site မျိုး၊ အဲဒီလို လုပ်ရပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေမျိုးကို ဘယ်လို impressive ဖြစ်ရမယ် ဆိုတာ၊ အဲလိုဟာမျိုးတွေက ပတ်ပတ်သတ်သတ်လာလုပ်တာကို ဘယ်လို ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံရမယ် ဆိုတာ မစဉ်းစားနိုင်အောင်ပါပဲ။
နောက်တခုက သူများဆီက ထောက်ပံ့ကြေးယူနေရတဲ့ဟာတွေကို ဘာမှ မဝေဖန်လိုပါဘူး။ ဒီတချက်တည်းနဲ့တော့ အထင်လည်း မသေးဘူး။ တခုပဲ အထင်လည်း ဘယ်တော့မှ မကြီးနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ နောက်တခုက သူများဆီက ထောက်ပံ့ကြေးယူနေရတဲ့ဟာတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်ကို ကျန်တဲ့လူတွေက လိုက်မယ်လို့ ထင်နေကြတာ သိပ်ရီစရာကောင်းတယ်။
ရန်သူ တူရုံနဲ့ တသွေးတည်း တသားတည်း တစည်းတည်း တလုံးတည်း ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
နောက်တချက် ကြုံခဲ့ရတာ ကြာလှပါပြီ။ ဘလော့တောင် စမရေးသေးဘူး။ ညလဆဘလော့မှာ နိုင်ငံရေးသမား အမည်မခံတဲ့၊ နိုင်ငံရေး တည့်(ဒဲ့) မရေးတဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုဟာက ရေးသွားတဲ့ မှတ်ချက်။ အဲဒီတုန်းက ညလဆ ဘာအကြောင်းရေးလဲ မသိဘူး။ မီးပျက်တဲ့အကြောင်း၊ ဗမာပြည်က အဆင်မပြေတာ တခုခုအကြောင်း ရေးတယ်ထင်တယ်။
အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေးသမား အမည်မခံတဲ့၊ နိုင်ငံရေး တည့်(ဒဲ့) မရေးတဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုဟာက ညလဆကို ဘာမှန်းသိပုံမရဘူး။ အဲဒီလိုတော်တဲ့ လူငယ်လေးတွေ ဗမာပြည်မှာ အချိန်တွေကုန်နေရတာကို သူ ရင်နာလှချည်ရဲ့ ဆိုလား ဘာလား လာရေးထားတယ်။
ဟိုက သင်္ဘောမတက်ချင်လို့ ပြန်သွားတာ၊ စင်ကာပူမှာ ကျောင်းတက်ပြီးမှ ပြန်သွားတာ သူ မသိဘူး။ ညလဆ ဘာတွေလုပ်နေလို့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ ထားပါ ဒါတွေ။ ကာယကံရှင်တောင် မပြောတာ ကျွန်မပြောနေဖို့မလိုပါဘူး။ တဆိတ်ရှိ ဒါပဲ လျှာယားပြေရုံ ထည့်ထည့်ပြောပြီး ခလုတ်တိုက်နေတာ မှန်နေသည့်တိုင်အောင် သူ့ဘာသာ ဗမာပြည်မှာ နေချင်လို့ကို ရွေးချယ်ပြီး နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို၊ သူများထောက်ပံ့ကြေး ယူပြီး ရောက်လာတဲ့ဟာက အဲဒီလိုပြောတော့ ရီချင်စရာ မကောင်းဘူးလား။ အဲဒီလို မှတ်ချက်သွားရေးတဲ့ဟာကို ကျွန်မ ခင်ခင်မင်မင် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တယ်။ သို့သော် ဘယ်သောအခါမှ impressive ဖြစ်မည်မဟုတ်၊ အဲဒီလိုဟာက ဦးဆောင်သွားမှ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကိုမှ မလိုက် (တကယ်တော့ သူဦးဆောင်လို့လည်း ဘယ်မှ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ refugees ခံပြီး နိုင်ငံကြီးတော့ ရောက်ချင်ရောက်မယ်)
ပြောရရင် ခွေးချင်းကိုက်တာတောင်မှ အဲဒါကြောင့်ပဲလို့ လက်ညှိုးထိုး ပါးစပ်ယားပြောရုံပြောနေတဲ့ဟာတွေကို စိတ်ကုန်တာပဲ။ ခွေးချင်းကိုက်နေတာ အမြင်မတော်ရင် ရေနဲ့ ပက်လိုက်ပါလား။ ဘာလို့ စကားလုပ်ပြောနေတာလဲ။ လုပ်နေသားပဲ ငါတို့လည်း အပြင်ကနေ ထောက်ပံ့နေသားပဲ လို့ ပြောချင်ပြောမယ်။ ထောက်ပံ့ရုံပံ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တဲ့ ဘယ်တစ်ယောက်က ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်လုပ်သလဲ။ သူတို့လို ခလုပ်ဝင်တိုက်ပြီး လျှာယားပြေရုံ စကားလုပ်ပြောနေသလား။ ထောက်ပံ့တာ စကားလုပ်ပြောမနေနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ တိတ်တိတ်နေ။ သူများထောက်ပံ့တာခံပြီး နေတဲ့ဟာတွေက အာကျယ်လို့ရတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ရှာစားနေတဲ့လူတွေက ပြောနေလို့ ရတာမဟုတ်ဘူး။ နှစ်တိုင်း ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ကိုယ့် passport နဲ့ ကိုယ် ခေါင်းမော့ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်၊ ကိုယ့်မိဘဆွေမျိုး သွားတွေ့နေရသေးတယ်။ အခြေအနေကို သဘောပေါက်။
ဒီနေရာမှာပဲ ရပ်လိုက်ရင် ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
အစ်ကိုမေးတာကို စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်ပါဘူး။
ပြန်ချုပ်ရရင် နိုင်ငံရေးသမားလို့ ခေါင်းစဉ်အတူတူ တပ်ဦးတော့ တကယ် လုပ်ပြီး၊ တကယ်ခံ အထဲမှာနေရတဲ့သူတွေနဲ့ အပြင်ရောက်နေတဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာ ကျွန်မရဲ့ စိတ်သဘောထားက အတူတူ မဟုတ်ပါဘူး။ အထဲမှာတော့နေပါရဲ့ အာရုံအာနေတဲ့ဟာတွေကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့။
ဆရာလုပ်တယ် မထင်ပါနဲ့ ဒေါ်ရီတာ။ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း အရင်တုန်းက အဲ့သလိုပဲလို့ အပြောခံရဖူးတယ်။ ဘာ့ကြောင့် အဲ့သလို ကိုယ့်ကို အဲ့သလို ပြောကြလဲ ဆိုတာလည်း သဘောပေါက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခုမှ အားလားလား ငါ့ထက်တောင် စွာမလား မသိဘူးလို့ မှတ်ယူ မိတယ်။
ဆရာလုပ်တယ် မထင်ပါနဲ့ ။ ဦးတင်မိုးကြီးက ကျနော့်ကို ဆုံးမဖူးတယ်။ မင်းရန်မဖြစ်နဲ့။ ဒီလိုလူတွေကို သမိုင်းက တံမြက်စည်းနဲ့ လှည်းချ သွားလိမ့်မယ်တယ်။ အဲဒိစကားကို လက်ဆင့်ကမ်းပါရစေ ဒေါ်ရီတာရေ။
တံမြက်စည်းတောင် တကယ်တော့ စောင့်စရာ မလိုပါဘူး။ သင်္ကြန်ကိစ္စမှာ ကိုယ်လိုလူတွေက အဲဒီလိုဟာတွေကို ဘယ်လို သဘောထားတယ်ဆိုတာ သိသာနေပါပြီ။ အဲဒီတုန်းက ညလဆ ရဲ့ fb မှာ Kalvin ဆိုတဲ့တစ်ယောက် ရေးသွားတဲ့ comment ကို အားအရဆုံးပါပဲ။
copy တော့ ကူးမတင်တော့ပါဘူး။ ရှုပ်လို့။ သူပြောထားတဲ့ အနှစ်သာရကတော့ ဖြေကြည့်သူများမှာ ကျွန်မပြောထားတဲ့ သဘောတရားနဲ့ အတူတူပဲ လို့ ယူဆမိပါတယ်။
... ဆိုတော့ ကျွန်မတို့လိုလူတွေ ဘယ်တော့မှ အဲလိုဟာတွေကို အဖက်လုပ်လို့ ဆရာတင်မှာ မဟုတ်တာ သေချာနေတယ်ဆိုတာကို ပြတာပဲ။
ဒါပေမယ့် လူကြီးသူမ ဆုံးမလို့ ငြိမ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကို မောလို့ ။
နောက်နည်းနည်း ပျင်းသွားတာလဲပါမယ် ထင်ပါတယ်။
so many " ညလဆ ညလဆ ညလဆ "
အဲဒီလို လာမှ ရေးပါ့မလားလို့ မျှော်လိုက်ရတာ။
သူ့ကုမ္ပဏီက သင်ပေးလိုက်ရပေမယ့်၊ တတ်သွားပြီး ထွက်သွားတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီအတွက် ဆုံးရှုံးတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အဲဒီလူငယ်ဟာ ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာပဲ ဆက်ရှိနေတာဖြစ်လို့၊ ဒါကို အနုတ်လက္ခဏာအဖြစ် သူ မယူဆပါဘူး
Positive mind and negative mind.
Difference people difference manner.
Difference point of view.
a man orawomen who hasapositive or negative mind!
I'd to say how they passed through the social environment.
That is depend on their background.
My wife isavery very honest lady.
She hasagood behaviour.
But she never believed to everybody. She looked down on all people by negative mind.
Not necessary to give answer.
မရီတာ ကျွန်တော် ကိုယ်ပေါဘလော့ လင့် ကနေရောက်လာပြီး စိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်ရှုသွားပါတယ်၊ မရီတာရဲ. ခံယူချက်ကို လေးစားပါတယ်၊ စာအရေးအသားကို ကြည့်ရတာ စိတ်တော်တော် တိုတတ်ပုံရတယ်၊ ရောက်ရောက်ချင်း ဝေဖန်တယ်လို. မထင်ပါနဲ. ၊ ကြောက်ကြောက်နဲ. ဝေဖန်မိတာ လူသစ် အနေနဲ. ခွင့်လွှတ်ပါ ခင်ဗျာ၊ မရီတာ နှင့် စာဖတ်သူများအားလုံးကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေ၊